Nala baro Lamaanayaasha Bollywood-ka kuwooda xiriirkooda ugu cimriga gaabnaa qaybta 1-aad (+sawiro) – Filimside.net
Nala baro Lamaanayaasha Bollywood-ka kuwooda xiriirkooda ugu cimriga gaabnaa qaybta 1-aad (+sawiro)
April 14, 2019 Jabriil Abdikadir
Bollywood iyo jaceylka dhabta ah kalama haraan madaama nolosha jilaayaasha fanka Hindiya siyaabo badan wax looga qoro kama marno in aad loogu mashquulo jaceylkooda hana qaaday ama hana qaadi waayay.
Hadaba waa wax iska dabiici ah in jilaayaasha Bollywood-ka shaqo wadaagaan qaarkood inay si gaar ah isku fahmaan kadibna meesha xiriir ka dhasho madaama is fahanka jaceylka nolosha bini aadanka qayb ka yahay.
Laakiin waxaan idiin heynaa 10-lamaane oo Bollywood-ka ka tirsan ama xiriir la leh kuwaas oo jaceyl dhex maray laakiin si dhaqsi ah ku kala hareen ama xiriirkooda u bur buray:
Siddharth iyo Soha Ali Khan: Soha Ali Khan waan wada naqaan waa Saif Ali Khan walaashiis oo hada u dhaxdo Kunal Khemu dhawaana hooyo noqotay.
Balse 11-sano ka hor Soha waxay jaceyl la wadaagtay wiilka lagu magacaabo Siddharth oo ay isla jileen filimka caanka ah Rang De Basanti, laakiin filimkaan Soha waxaa faraanti u galinaayay R Madhavan halka Siddharth oo ka mid ahaa jilaayaasha.
Soha iyo Siddharth inta Rang De Basanti duubistiisa socotay ayay is fahmeen laakiin mudo gaaban kadib wey kala hareen madaama Soha ay ka weesay Siddharth balan ku aadan sii wadista xiriirka xiligaas ka dhaxeeyay.
Uday Chopra iyo Tanishaa Mukerji: Labadaan waxay isla jileen filimkii bur buray ganacsi ahaan ‘Neal n Nikki’ laakiin waxay ka faa’iideen inay isku fahmeen inta shaqada socotay, Uday waxaa dhalay Director Yash Chopra halka Tanishaa ay la dhalatay Kajol.
Si dhaqsi ah ayay isku fahmeen waxayna ku balameen guur laakiin si lama filaan ah Tanishaa ayaa balanka Uday kaga baxday madaama ay guurka xili dambe go’aan ka qaadatay aqbaladiisa sidaasna ayaa lagu kala tagay.
Shahid Kapoor iyo Hrishita Bhatt: Waxay isla sameeyeen xayeysiintii filimka ahayd Aankhon Mein Tera Hi Chehra kadibna jaceyl ayaa dhex maray ayagoo aad u dhalin yar.
Laakiin Shahid ayaa xiriirka u jaray Hrishita marka ay noqon weesay atirisho caan ah oo Bollywood-ka sal dhigato wuxuuna ka raacay Kareena Kapoor.
Ranveer Singh iyo Ahana Deol: Ranveer xiligii uu College-ka dhiganaayay ayuu jaceyl la wadaagay Hema Malini iyo Dharmendra gabdhooda yar Ahana Deol.
Laakiin Ranveer ayaa xiriirka u jaray Ahana markii uu Bollywood-ka kusoo biiray halka Ahana waxbarashadeeda iska wadatay meeshaas ayayna labo wado ku kala qaadeen.
Ranbir Kapoor iyo Avantika Malik: Ranbir Kapoor oo dalka Mareekanka wax ku baranaayo waxay waqti kooban oo wacan isla qaateen Avantika Malik, laakiin markii gudaha Hindiya lagu soo laabtay Ranbir Bollywood-ka ayuu ku biiray wuuna iska hilmaamay Avantika asigoo bartay hablo kale sida Sonam, Deepika iyo Katrina.
Ranbir hada nolosha kali ayuu ku yahay halka Avantika oo shaqadeeda Model tahay Bollywood kusoo biirin waxayna guursatay Imran Khan oo atoore Bollywood-ka ka tirsan ah sidoo kalena waa hooyo oo gabbar yar ayaa u joogto.
La Soco Qaybta Labaad Lamaanayaasha Bollywood-ka kuwooda xiriirkooda ugu cimriga gaabnaa…